एथ्लेटिको मड्रिडको कडा फवार्ड लाइन बार्सिलोना र रियल मड्रिडलाई भालुको कन्पारो ! कसरी रोक्ने, केले छेक्ने ? – Medianp
एथ्लेटिको मड्रिडको कडा फवार्ड लाइन बार्सिलोना र रियल मड्रिडलाई भालुको कन्पारो ! कसरी रोक्ने, केले छेक्ने ?
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शनिबार, साउन २६, २०७५०९:२८0
काठमाडौंः स्पेनिस ला लिगामा एथ्लेटिको मड्रिडले बार्सिलोना र रियल मड्रिडलाई कडा टक्कर दिँदै आएको छ । सन् २०१३–१४ को सिजनमा ला लिगा विजेता बनेको एट्लेटिको मड्रिडले यूरोपको प्रतिष्ठित फुटबल प्रतियोगित च्याम्पियन्स लिग तथा यूरोपा लिगमा पनि राम्रो प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ । एट्लेटिको मड्रिड गत सिजनको यूरोपा लिग विजेता हो साथै ला लिगामा पनि राम्रो प्रदर्शन गरेर दोस्रो स्थानमा लिगको अन्त्य गर्यो ।
एट्लेटिको मड्रिडको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको कडा रक्षापंति र काउन्टर अट्याक गर्ने खेलाडी । यो रणनीतिमा प्रशिक्षक डिएगो सिमियोन सफल पनि हुँदै आएका छन् । मड्रिडमा रहेको एट्लेटिको मड्रिडले नयाँ सिजनको लागि फरवार्ड लाईन पनि निकै कडा बनाएको छ ।
अग्रपंतिका यी खेलाडीहरु बार्सिलोना र रियल मड्रिडको लागि टाउको दुखाई बन्न सक्ने स्पेनिस मिडियाले विश्लेषण गरिरहेका छन् ।एट्लेटिको मड्रिडसँग नयाँ सिजनको लागि अग्रभागमा डिएगो कोस्टा, एन्टोनियो ग्रिजम्यान, एंगेल कोरिया, निकोला कालिनिक, थोमास लिमार, भिटोलो तथा जेल्सन मार्टिन्स रहेका छन् ।
रोमान्समा टेरी जोडी
विश्वकपमा चम्किएका मड्रिक र एम्बाप्पे आउट, बर्ष खेलाडीको शिर्ष तीनमा रोनाल्डो, मेस्सी र सलाह
संसारकै लोकप्रिय खेलाडीको शिर्ष स्थानमा रोनाल्डो, मेस्सी र नेयमार कहाँ ?
मेस्सीले भने, ‘च्याम्पियन्स लिग हामी जित्दैछौं’